ကဗျာ အရမ်းကောင်းပါတယ်။ သင်းကွဲဖြစ်တဲ့ ၀ံပုလွေတွေ တစစီ တကွဲစီ နေရာ အနှံ့အပြားမှာ တွေ့နေရတယ်။
ကိုမိုးသီး တခါတုန်းက ဆရာနိုင်ဝင်းဆွေအကြောင်း ရေးတဲ့စာလဲ ကောင်းတယ်။ ဒီကဗျာတော့ ခုမှ ဖတ်ဖူးတာပါ။
ဝံပုလွေ တွေ ကွဲတာထက် အချင်းချင်း ကိုက်နေလို့ ဝံပုလွေ ဇာတ်ပျက် တာတွေ လဲ ရှိပါ့ အကိုရေ...
တစ်ကယ့် ဝံပုလွေ အစစ် တွေ အတွက်တော့ ဌါနေကို မှန်းပြီး အူသံ ပေးနေရတာ တစ်ချိန်တော့ ချုပ်ငြိမ်း နိုင်ကောင်းပါရဲ့..။
နည်းနည်း နောက်ခံလေးကို ထပ်ဖြည့်စွက်ပါရစေ။ အဲသည်အချိန်က ကိုမိုးသီးဇွန်က အမေရိကန်ကို ခရီးစဉ်တခုအလာမှာ ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေက ပြန်လာခွင့်ကို ပိတ်လိုက်ပါတယ်။ အလားတူပါပဲ NCGUB က ဒေါက်နာစိန်ဝင်းတို့ အပါအ၀င် အချို့အမတ်တွေလည်း ပိတ်ပင်ခံရပါတယ်။ အဲသည် အချိန်က ခံစားချက်နဲ့ ရေးထားတဲ့စာပါ။ အဲသည် အချိန်က မဲစရိယန်း၊ မဲဟောင်ဆောင် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရုံးမှာ ကိုမိုးသီးဇွန် ဓါတ်ပုံနဲ့ ဖမ်းဝရမ်းတောင် ထုတ်ထားခံရသေးတယ်။
နောက်တော့ ကမ်ဘောဒီးယားနယ်စပ်ကတဆင့် ပြန်ခိုးဝင်လာခဲ့တယ်။ ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကလည်း နောက်တော့ သူတို့ ၀ရမ်းကို ပြန်လျှောချသွားခဲ့ပါတယ်။
ဒီကဗျာကို ခိုက်မိပါရဲ့ ...ကျနော်လဲ ရှေ့က လူကြီးမင်းများလို ထပ်ဖြည့်စွက်ချင်ပါတယ်။ ဝေါကီ တော်ကီက RT လို့ခေါ်တဲ့ Radio Telegraphy ပါ၊ WT က ဆင်မြူရယ် ဖင်လေ ဘရီဇ် မော့(စ်) ထွင်သွားတဲ့ ဗမာလို အရပ်ပြော ဒါဒါဒစ်ဒစ်..ဒစ်ဒစ်ဒါဒါ ..လို့ပြောကြတဲ့ မော့(စ်) WT - Wireless Telegraphy ပါ၊ ကိုအောင် ပြောတဲ့ ရထား ဖြစ်လား? ဆိုတာ RT အမျိုးအစားပါ၊ ကိုအောင် ပြောချင်တာကို ဒူကဘာ ဥတ္တရတောင်တန်းတွေ ကအထိ ရထား... ဖြစ်တယ်..ရထား ဖြစ်တယ်.. ပျံနေတဲ့ ..ဌက်ရဲ့ ..အသိုက်ကို တွေ့တယ်...ဒါပဲအကြောင်းပြန်! :P
ဒီကဗျာကို ရိုးမပေါ်မှာ စီးမျောရင်းနဲ့... ညှပ်အိုးထီးနှင့် ၀ါးမြိုချခဲ့ဘူးတယ်။
အခုထိ အသံ ၅ ရထားဖြစ်နေဆဲပါ
ကိုဆောင်း - ရထား... ရထား...
ညီမမိုးချို - ဖတ်သွားတာ ကျေးဇူးပါ...
လင်းထက် - တနေ့နေ့ပေါ့လေ
မိုးကြယ် - လာဖတ်တာ ကျေဇူးညီရေ့..
ကိုယော - ကျနော်လည်း သိတယ်လေ
ပြောရကောင်းမလား မကောင်းလား စဉ်းစားနေတာ ကိုယော ပြောပြလိုက်တော့လည်း ပိုကောင်းသွားတာပေါ့...
ဒူကဘာ - မာလာတယော... မာလာတယော...
လူလ - ၄-၅ ကြားတယ်ပေါ့.. ရထား... ရထား...
အင်း ၀ံပုလွေတွေ သွေးစည်းသင့်တယ်။
ကဗျာရော သမိုင်းအတွက်ပါ ကျေးဇူးပါ။ အစ်ကိုတို့ ပြောပြမှ သိရမှာပါ။
ဒါနဲ့စာလုံးပေါင်းလေး ပြင်လိုက်ပါဦး။ "ဒေါက်တာစိန်ဝင်း"။ ကိုယောက typo မတော်တဆ မှားသွားတာဖြစ်မှာပါ။ တော်ကြာ နားလည်မှုတွေ လွဲကုန်မှာစိုးလို့။ :)
သိပ်ကောင်းတဲ့ကဗျာပဲ။ သင်းကွဲဝံပုလွေတွေကတော့ နေရာအနှံ့ပါပဲ။
ကဗျာကို ဝေမျှပေးတာ ကျေးဇူး အကိုကြီး။
သိပ်ကောင်းပြိး သိပ်လေးနက်တဲ့ ကဗျာပါ....
၀ံပုလွေရဲ့ ရင်ကို ခံစားပေးနိုင်ပါတယ်...
မှတ်မှတ်ယယ ၀ရမ်းထုတ်ထားလို့ပုန်လျှိူးကွယ်စွာပြန်ဝင်လာလို့ထိုင်းရဲတွေ လိုက်နေချိန်မှာ ကျနော်ချက်တဲ့ ထမင်းဟင်းကို သူနဲ့ လက်ဆုံစားခဲ့ ဘူးတယ်...
ကြက်သားဟင်းနဲ့ ကျွေးပေမယ့်...ငါးခြောက်ဖုတ်လေးဖြစ်ဖြစ် ငါးပိရည်လေးဖြစ်ဖြစ်လုပ်ပေးပါလားဗျာလို့ ပြောရင်း
ငါးပိရည်တို့ စရာနဲ့ ၂ယောက်အတူထမင်းစားခဲ့ တုန်းက
လေးစားစိတ်ကိုယ်ချင်းစာစိတ်နဲ့ ခင်မင်ခဲ့ မိတယ်...
သင်းကွဲနေတဲ့ ဝံပုလွေရဲ့ အားတွေကို လွမ်းတယ်ဗျာ...။
ကိုမိုးသီးရဲ့ ဘလော့ sidebar မှာတင်ထားတာ ဖတ်ရတယ်ဗျ။ ကဗျာလေး အရမ်းကြိုက်တယ်။ အခုလည်း နောက်ခံသမိုင်းနဲ့ အတူတူ ပြန်ဖတ်သွားပါတယ် အစ်ကို။
ဒီကဗျာအရင်ကတည်းကဖတ်ဘူးတယ်၊ အခု ပြန်လည်ဝေမျှပေးတော့ ချယ်ရီမြေရောက် သင်းကွဲဝံပုလွေတစ်ကောင်လည်း စွဲစွဲငင်ငင်အူမိတယ်၊ အသံငါးရထားဖြစ်နေဆဲ...။
အိုင်လွယ်ပန် - ကျေးဇူးပါ ညီရေ့...
Apprenticeship - ဟုတ်ပါ့...
မပန် - ပြန်ပြင် ထားပါတယ်...
ကိုကိုးနိုင် - မျှော်လင့်ချက်တွေတော့ ရှိနေဆဲပါ...
မေ့သမီး၊ ကိုအောင် - ဖတ်သွားတာ ကျေးဇူးပါ...
ကိုသစ် - အဲ အတွေ့အကြုံလေးကို စာရေးပါလား... မှတ်တမ်းလေး ဖြစ်တာပေါ့...
ကောင်းကင်ကို၊ ကိုမောင်ရင် - ကျေးဇူးပါ...
ကမာနီလာ - အာလူး ခရေ အာလူး နီလာ ကောင်းလားး... ရထားလား...